जसलाई धरै पैसा कमाउन मन छ अपनाउँनुहोस् रतन टाटाका यी प्रभावकारी टिप्स - ज्ञानविज्ञान
जसलाई धरै पैसा कमाउन मन छ अपनाउँनुहोस् रतन टाटाका यी प्रभावकारी टिप्स
रतन नवल टाटालाइ नचिन्ने मान्छे कम नै होलान । उनको छोटो परिचय हामी मिलेछ भने तपाईहरुलाई कुनै दिन भन्ने छौ । आज हामी उनले सफल हुनका लागि दिएका १० प्रभावकारी टिप्सबारे हामी जानकारी दिँदै छौं जुन तपाई लाबदायक हुन सक्छ ।
१. रतन टाटाको मान्यता अनुसार व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र परिस्थिती अनुसार अवसर र चुनौतीको पहिचान गर्नुपर्छ । तपाईंबारे तपाईंभन्दा राम्रो अरु कसैले पनि बुझेको हुँदैन त्यसकारण तपाईं आफ्नो वर्तमान परिस्थिती र योग्यतालाई बिचार गरेर अवसरको सही लाभ उठाउनुहोस् ।
२. तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ त्यसलाई स्विकार गर्न आफूभित्र एक क्षमताको विकास गर्नुहोस् । वास्तविकतामा जिउँन भरपुर कोसिस गर्नुहोस् । जबसम्म तपाईं आफूमाथि विश्वास राख्नुहुन्न, जीवन राम्रोसँग चल्न सक्दैन ।
३. रतन टाटा वर्तमान समयमा यति उचाईसम्म पुगिसकेपछि पनि निकै विनम्र स्वभावका व्यक्ति हुन् र उनका अनुसार विनम्रता मानिसको व्यक्तित्वको आभुषण हो । विनम्रताले हाम्रो व्यक्तित्वमा निखार ल्याउनुका साथै थुप्रै पटक हाम्रो सफलताको कारण पनि बन्ने गर्दछ ।
४. के तपाईंलाई थाहा छ, रतन टाटाले पढाई पूरा गरेपछि जब काम सुरु गरे तब उनको पहिलो काम के थियो ? उनी टाटा स्टिलको ब्लास्ट फर्नेसमा कोइला र चुन ढुङ्गा फ्याँक्ने काम गर्दथे । तर उनले यो कामलाई निकै दृढताका साथ गरे र आज उनी कहाँ पुगेका छन् त्यो हामीलाई थाहै छ ।
त्यसकारण रतन टाटा सधैं यो मान्छन् कि कुनै पनि काम सानो र ठूलो हुँदैन । मात्र व्यक्तिले आफ्नो कामलाई पूरा दृढता र आनन्दपूर्वक गर्नुपर्छ । यतिमात्र होइन, जीवनको बाटोमा थुप्रै बाधा व्यावधान आउँछन्, यसबाट पछि हट्नुको साटो त्यससँग जुघ्नुपर्छ ।
५. हरेक व्यक्तिले सधैं उच्च मानसिकता राख्नुपर्छ नभए पछि पर्ने सम्भावना निकै उच्च हुन्छ । जसरी फलामलाई कसैले हानी गर्न सक्दैन तर त्यसको आफ्नै लडाईंले त्यसलाई नष्ट गर्नसक्छ त्यसरी नै कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैले नष्ट गर्न सक्दैन, उसको आफ्नै मानसिकता बाहेक ।
६. रतन टाटाको मान्यता अनुसार हरेक दिन हामीले केही न केही गर्नैपर्छ ता कि पछि हामीले पछुताउन नपरोस् । उनी भन्छन्, ‘जुन दिन म उड्न योग्य हुने छैन, त्यस दिन मेरा लागि सबैभन्दा नराम्रो दिन हुनेछ । ’ त्यसकारण हरेक दिन हामीले केही न केही गरिराख्नु पर्छ अनिमात्र भविष्यमा त्यसको नतिजा देख्न पाइन्छ ।
७. रतन टाटाका अनुसार हामीले सधैं आफू वरिपरिका व्यक्तिहरुसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । यदि तपाईं एक व्यवसायी हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो ग्राहकको विश्वास जित्नुहोस् । विश्वास संसारको सबैभन्दा अमूल्य पुँजी हो र यसले मानिसलाई सफल बनाउन निकै सहयोग गर्दछ ।
८. जीवनमा सधैं केही नौलो गर्न प्रयास गरिरहने रतन टाटाका अनुसार हामीले कसैलाई पछ्याउनु हुँदैन । सधैं अरुले भन्दा भिन्न गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । यति गरेमात्र भीडबाट अलग हुन सक्छौं । हरेक व्यक्तिमा केही विशेष गुण र प्रतिभा हुन्छ त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिले आफूभित्रको आन्तरिक गुण र प्रतिभाको पहिचान गर्ने कोसिस जारी राख्नुपर्छ ।
९. यदि कुनै काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने त्यसलाई पूरा गरेर मात्र विश्राम लिनुहोस् । कठिनाइबाट कहिले पनि भाग्नुहुन्न । जहाँ संधर्ष छ, सफलता पनि त्यहीँ छ ।
१०. सफलताको कहानी पढ्नुहोस् र त्यसबाट केही सिक्नुहोस् । सफलताको कहानी पढ्दा मानिसभित्र नयाँ आशा संचार हुने गर्दछ । यस्ता कहानीले मानिसलाई केही ठूलो गर्ने उत्प्रेरित गर्छ ।
हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिएइका छाै
कुनैपनि व्यक्ति कमाएर होइन, बचत गरेर धनी हुन्छ । किनभने जति कमायो उति खर्च गर्ने मानिस कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दैन । तर, आफ्नो कमाईबाट बचत गर्दै थप लगानी गर्दै अघि बढ्ने मान्छे अवश्य धनी हुन्छ ।
धनी बन्न त्यति सजिलो छैन । मान्छे न कमाएर मात्रै धनी हुन्छ, न त बचत गरेर मात्रै । प्रत्येक समय उपयुक्त निर्णय गर्दै पैसाको सदुपयोग गर्न सक्ने मान्छे मात्रै धनी हुन्छ । यस्तो गर्नसक्ने क्षमता एकदमै कमसँग मात्रै हुन्छ ।
अर्थशास्त्री स्टुअर्ट रदरफोर्डले भनेका छन्– बचत धनी मानिसले मात्र गर्ने कुरा होइन बरु यो गरिबहरुको साथी हो । आफ्नो कमाइबाट नियमितरुपमा बचत गर्न सक्ने हो भने गरिब मानिस पनि धनी बन्न सक्छ । तर, २ र ४ हजार बचत गरेर के नै हुन्छ र रु भन्ने मानिस जुन अवस्थामा छ, त्यहाँभन्दा माथि उठ्न निकै कठिन हुन्छ ।
आजको स-सानो बचतले भोलि तपाईलाई ठुल्ठुला आर्थिक भारबाट जोगाउन सक्छ । त्यसैले आफ्नो कमाइबाट बचत गर्नुहोस् । तपाईं जति कमाउनुहुन्छ पहिला त्यसको हिसाब गर्नुस् र, आफ्नो आम्दानीबाट कति रुपैयाँ बचत गर्ने ? त्यो यकिन गर्नुहोस् । म यति रुपैयाँचाहीँ बचाउँछु भनेर तपाई लाग्नुभयो भने मात्रै तपाईंले फजुल खर्च कटौति गर्न सक्नुहुन्छ ।
एकदिन, एक महिना वा एक वर्ष मात्रै बचत गरेर पनि हुँदैन । तपाईंले सँधैका लागि बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । एक वर्षसम्म दैनिक १० रुपैयाँ मात्रै जम्मा गर्ने हो भने एक वर्षमा करिव ३,६५० रुपैयाँ हुँन्छ । तपाईं सिगरेट पिउनुहुन्छ भने दिनको एउटा सिगरेट कम गर्नुहोस् । र, त्यो पैसा बचत गर्नुहोस् ।
अनि यसरी बचत गरेको पैसा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाहरुमा राख्नुहोस् । यी संस्थाहरुले ब्याज दिन्छन् । र, तपाईको पैसाको सुरक्षा पनि राम्रो हुन्छ ।
बैंकको ब्याजले मात्रै पनि पुग्दैन । त्यसैले यसरी बचत गरेको पैसाले बीमा गर्नुहोस् । बीमा गर्नुभयो भने तपाईंले आफ्नो लाखौंको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सक्नुहुन्छ । बीमा गर्नका लागि खर्च गरिएको रकम पनि बचत नै हो ।
खर्च गर्नुअघि १० पटक सोच्नुहोस् कि यो मेरो आवश्यकता हो कि होइन भनेर । यदि तपाईंको आवश्यकता होइन भने खर्च गर्नतिर नलाग्नुहोस् ।
धनी र सफल बन्न चाहने मानिसले आफ्नो लाइफस्टाइलबाट हटाइदिनुपर्ने कुराहरु
बोल्ने मात्र, काम चाहि नगर्ने
तपाईले बोलेर वा सोचेर मात्र हुँदैन । हावामा महल बनाएर केही हुनेवाला छैन । तपाई कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईले सोचेको वा बोलेको कुरा गर्नुहुन्न । त्यसकारण जे काम गर्छु भनेर योजना बनाउनु भएको छ, त्यसलाई तुरुन्तै थालिहाल्नुपर्छ ।
कुनै लक्ष्य नहुनु
मानिसको एउटा निश्चित लक्ष्य हुन आवश्यक छ । तपाईसँग आफ्नो जिन्दगीको एक ब्लूप्रिन्ट हुनुपर्छ । यसबाट तपाईलाई लामो समयसम्म सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
काममा फोकस नहुनु
तपाई आफ्नो काममा निरन्तर जोडिइरहनुपर्छ । काममा जिद्धी ढंगले निरन्तर लागिरहनुपर्छ । तपाई सफल बन्नका लागि लगातार काम गर्नुपर्छ र काममा फोकस भइराख्नुपर्छ ।
आफूलाई शंका गर्न छाड्नू
यो सबैभन्दा नकारात्मक बानी हो, जसलाई तपाईले आफ्नो लाइफस्टाइलबाट हटाइहाल्नुपर्छ । यो बानी कायमै रह्यो भने तपाईले देखेको सपना पूरा हुनको साटो उल्टो टुट्न चाहि थाल्छ ।
त्यसकारण आफैंमाथि कहिल्यै शंका नगर्नुहोस् र आफ्नो नकारात्मक भावना तथा विचारलाई तर्कको आधारमा सुल्झाउने कोशिश गरिराख्नुहोस् ।
उपयुक्त समयको प्रतिक्षा गर्नु
यस्तो कुनै समय हुँदैन, जसलाई सही समय भनियोस् । तपाईले संभावित जोखिमको पहिलादेखि नै आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर जुन समय तपाई पहिलादेखि नै गर्न चाहिरहनुभएको छ त्यसका लागि कुनै समय पर्खिएर बस्नुहुन्न । यस्तो काममा आफूलाई समय आउला र गरौंला भनेर रोक्ने भूल नगर्नुहोस् ।
नयाँ नयाँ जानकारी हासिल गर्नु एक निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसकारण सफल मानिस कहिल्यै पनि पढ्न छाड्दैनन् । उनीहरु पढ्छन्, मानिसहरुसँग कुरा गर्छन् र विश्वमा के भइरहेको छ भन्ने बिषयमा आफूलाई अपडेट गरिरहेका हुन्छन् ।
हामी पढेर परीक्षामा उच्च अंक हासिल गर्न चाहन्छौं । राम्रो जागिर खान चाहन्छौं । भौतिक सुख सुविधाले सम्पन्न हुन चाहन्छौं । आफ्नै घर, आफ्नै गाडी होस् भन्ने चाहन्छौं । आफन्त, साथीभाई सबैसँग समधुर सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं । किन ?
किनकी यी सबैबाट हामी खुशी प्राप्त गर्न चाहन्छौ । हाम्रा यी सबै प्रयास र अपेक्षाको एउटै गन्तव्य हो, खुशी ।
त्यतीमात्र होइन, हामी मिठो खानेकुरा खान्छौं । हामीलाई स्वाद लाग्छ । त्यसबाट प्राप्त गर्ने पनि खुशी नै हो । हामी राम्रो लुगा लगाउँछौ । सबैले राम्रो भनिदिन्छन् । त्यसबाट हुने पनि खुशी नै हो ।
हामी सन्तुलित खानेकुरा खान्छौं । व्यायाम गर्छौं । सक्रिय रहन्छौ । किन ? किनभने शरीरमा कुनै कष्ट नहोस् । दुःख नहोस् । अर्थात खुशी मिलोस् ।
खुशी नै जीवनको शक्ति हो । सौन्दर्य हो । तर, कहाँ पाइन्छ खुशी ? कसरी मिल्छ खुशी ?
हामी सोच्छौ पैसाले खुशी मिल्छ । धन दौलतले खुशी दिन्छ । हो, यसले हाम्रो जीवन यापनलाई सहज बनाउँछ । हाम्रा अप्ठ्यारा र समस्याहरु सल्टाइदिन्छ । जीवनलाई केही हदसम्म सहज बनाउँछ । यसर्थ यी माध्यम हुन्, स्रोत होइनन् ।
पैसाले खुशी मिल्छ भने सबैभन्दा धनाड्य संसारका सबैभन्दा बढी खुशी हुने थिए । जबकी विश्वका सबैभन्दा धेरै धनराशीका स्वामी र एउटा फुटपाथमा जीवन गुजार्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने खुशीमा कतिपनि अन्तर छैन । एउटा अर्बपतिले करोडौं आर्जन गर्दा जति खुशी अनुभूत गर्छ, त्यती नै खुशी एउटा फुटपाथमा बस्नेले भरपेट खान पाउँदा गर्छ ।
यसर्थ खुशीको मात्रा र परिणामले न धनी भन्छ, न गरिब । न शक्तिशाली भन्छ, न कमजोर । खुशी त उही हो । अझ घतलाग्दो कुरा त खुशी बाहिर होइन, हामीभित्र छ । हामी आफु स्वयम् खुशीका स्रोत हौ ।
खुशी, किन्नुपर्दैन । खुशी, माग्नुपर्दैन । खुशी, चोरी डकैती गर्नुपर्दैन । किनभने यसको अथाह स्रोत हामीभित्र छ ।
नेपालीमा प्रचलित भनाई छ, भोक मिठो कि भोजन ? निद्रा मिठो कि ओछ्यान ?
वास्तवमा कुनै भौतिक वस्तु वा उपलब्धी खुशी होइनन् । खुशीका स्रोत होइनन् । खुशी त हामीभित्र छ ।
खुशी हुनु एक मानविय व्यवहार, प्रवृत्ति हो । हामी सधै खुशीको खोजीमा हुन्छौ । खुशीको खोजीमा नै हामीले खुशी पनि गुमाइरहेका हुन्छौ । किनभने हामीलाई लाग्छ, खुशी ति तमाम भौतिक कुरामा छन् जसको प्राप्तीले हामीलाई खुशी बनाउँछ ।
खुशी हुनका लागि हामीलाई पैसाको जरुरत पर्दैन । ऐश आरमको जरुरत पर्दैन । मिष्ठान्न भोजनको आवश्यक्ता पर्दैन । खुशी हुनका लागि केवल यसको स्रोत आफैभित्र छ भन्ने बुझे पुग्छ ।
खुशी किन हुने त ?
जब हामी खुशी हुन्छौ, प्रफुल्ल हुन्छौ, तब हामी आसपासको वातावरण पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रा अघिल्तिर उभिएका मान्छे पनि प्रफुल्ल हुन्छन् । घर परिवारका सदस्य खुशी हुन्छन् । खुशीले खुशी विस्तार गर्छ ।
जब हामी खुशीको अवस्थामा हुन्छौ, हाम्रो मन शान्त हुन्छ । मस्तिष्क स्थिर हुन्छ । हामी फुरुंग हुन्छौ । यसले शरीरका विकारहरु हटाउँछ । रिस राग, घृणा, क्रोधको स्तर घटाइदिन्छ । अर्थात हाम्रो मनोविकार पखालिन्छ ।
यसर्थ हामी खुशी हुनुपर्छ । खुशी हामी आफैसँग छ । साना साना उपलब्धी, साना साना कुरामा पनि हामीले खुशी हुने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । किनभने खुशी नै संसारको सौन्दर्य हो ।
खुशी हुनका लागि त्याग्नु पर्ने केही कुरा
गहिरो सास लिने गर्नुस्
दिनहुँ गहिरो सास लिने गर्नुभयो भने शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्न पुग्छ, जसले शरीरसँगै मनको विकारलाई पनि कम गरिदिन्छ ।
गहिरो सास लिँदा शरीरमा सकारात्मक भाव जगाउने खालका रसायन उत्सर्जन हुन्छन्, जसले तपाईंलाई प्रसन्न राख्न मद्दत गर्छन् ।
चाहना कम गर्नुस्
चाहना बढी गर्नुभयो भने जतिसुकै पैसा साथमा भए पनि पूरा गर्न सकिँदैन । चाहना पूरा गर्न सकिएन भने दुःखी भइन्छ । त्यसैले खुशी भइरहनका लागि चाहना कम गर्नुपर्छ ।
धेरै महत्वाकांक्षा नराख्नुस्
कुनै उद्देश्य राखेर यसका लागि आफूलाई क्रमशः तयार गर्दै लैजानु राम्रो हो । तर, चाँडै कुनै नतिजा हासिल गर्ने महवाकांक्षा राख्नुभयो भने यसले तपाईंलाई तनावमा राख्छ ।
यसले तपाईंको खुशी समाप्त पारिदिन्छ । त्यसैले बढी महवाकांक्षी नबन्नुस् ।
हाँस्न, रमाइलो गर्न मन लाग्दैन भने पनि मुस्कुराउने प्रयत्न गर्नुस् । बिस्तारै यसलाई बानी बनाउन खोज्नुस् । हाँस्दै जानुभयो भने बिस्तारै यसैमा तपाईंको बानी पर्छ ।
हाँस्दाखेरि शरीरमा सकारात्मक भाव जगाउने रसायन उत्सर्जन पनि बढ्न थाल्छ, जसले तपाईंलाई क्रमशः खुशी बनाउँदै लैजान्छ ।
ऐना हेर्दा खुशी हुनुस्
ऐना हेर्दा नराम्रो कुरामा ध्यान दिन बिस्तारै छोड्नुस् । कपाल पातलो छ, अनुहारमा दाग छ, ओठ खुँडे छ अथवा यस्तै कुनै त्रुटि तपाईंको शरीरमा छ भने ऐना हेर्दा त्यस्ता कुरामा त्यति ध्यान नदिनुस् र ऐना हेरेर मुस्कुराउनुस् ।
दिनहुँ यसो गर्नुभयो भने तपाईं सकारात्मक बन्दै जानुहुन्छ र खुशी पनि बन्दै जानुहुन्छ ।
अरूले चाहेजस्तो नबन्नुस्
अरूले आफू कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् भन्दा पनि आफू कस्तो बन्न चाहन्छु भन्ने कुरालाई प्राथमकिता दिनुस् । अरूले हेभी मेकअप गरेको हेर्न चाहन्छन्, तर आफूलाई लाइट मेकअप गरेकै मन पर्छ भने आफ्नो चाहनाअनुसार चल्ने गर्नुस् ।
यसले तपाईंको मौलिकतालाई जोगाइराख्छ र तपाईंको मौलिकतासँग सहमत व्यक्तिको संगतमा तपाईंलाई पुर्याउँछ, जुन खुशी रहन सहायकसिद्ध हुन्छ ।
तपाईंले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ अथवा अफू र आफ्नो परिवेशप्रति लाज महसुस हुने गरेको छ भने यस्तो लाज आजैदेखि त्यागिदिनुस् । यसले तपाईंलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ ।
सिर्जनात्मक काममा लाग्नुस्
लेख्ने, पढ्ने, चित्र कोर्ने, नाच्ने, गाउने, खेल्ने, सिलाइबुनाइ गर्नेजस्ता सिर्जनात्मक काम गर्नुस् । सिर्जनात्मक काममा लागियो भने शरीरका नकारात्मक ऊर्जा सिर्जनात्मक ऊर्जामा परिवर्तन हुँदै जान्छन् र मन प्रसन्न रहन थाल्छ ।
नोट: माथि उल्लेखित जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
Don't Miss it यस्ता ठाउँमा पाइने च्याउ खानु त के छुनुसम्म हुँदैन, थाहापाइराख्नुहोस
Up Next शंख बजाउदा हुने अनेक फाइदाहरु यस्त छन्
मधुमेहका रोगी देखि लिएर अन्य थुप्रै रोगीलाई लाभकारी हरियो मकै जानकारी लिनुहाेस्
मकै स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । हरियो मकै पोलेर खान सकिन्छ भने सुकेको मकै भुटेर पनि खान सकिन्छ ।…
पुदिना स्वादिलो अचारमा मात्र होइन, यसले हाम्रो स्वस्थ्यमा पनि स्वादिलो फाइदा पुर्याउछ जान्नुहोस्
पुदिना हामीले अचारमा मिसाएर पिसेर खादा बेग्लै स्वाद पाइन्छ । यो हिमाली प्रदेशबाहेक तराई पहाड जहाँ पनि पाइन्छ । पुदिना…
यस्ता ३ कुरा जसले तपाईलाई जिवनमा असफल बनाउन सक्छन्, जान्रुहाेस्
हाम्राे प्रगती र खुसीकाे बाधक हामी आफै हाैँ । हाम्राे साेच, हाम्राे व्यवहार हाम्राे बानी, हामीले लिने निर्णयले हाम्राे सफलता…
घरैमा उपलब्ध केही कुरा जसले गर्दा रक्सी र चुरोट छुटाउन सकिन्छ
अदुवा रक्सी र चुरोटको नशा छुटाउन दिनदिनै अदुवाको टुक्रा लिएर बिस्तारै चपाइरहनुस् । केही दिन यसो गरिरहँदा लत छुट्छ ।…
हाेसियार ! सुत्नु अघि बिर्सेर पनि गर्दै नगर्नुहोस यी कामहरू
हाम्रो शरिर स्वस्थ राख्नको लागि स्वस्थ खानपान र व्यायाम मात्रै होइन आरामको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार हामीले…